Maxaa ku khasbay gabar reer Iiraan inay guri saqafkiisa kore ay cayaar kasoo tebiso? - BBC News Somali
Maxaa ku khasbay gabar reer Iiraan inay guri saqafkiisa kore ay cayaar kasoo tebiso?
Xigashada Sawirka, Abolfazl Amanollah
Waa sawirka Parisa Pourtaherian oo cayaarta tebinaysa
Gabar sawir-qaade ah oo u dhalatay dalka Iiraan ayaa soo jiidatay indhaha caalamka kaddib markii ay iska dhaga tirtay xayiraad haweenka ka hor istaagaya inay soo tebiyaan garoomada ay ka socdaan cayaaraha kubadda cagta.
Parisa Pourtaherian oo 26 jir ah ayaa u suuro geli wayday inay sawirro kasoo qaaddo garoonka kubadda cagta ee Vatani ee ku yaalla waqooyiga Iiraan halkaaso ay cayaar ay ka socotay bishii lasoo dhaafay.
Balse waxay fuushay saqafka guri ka agdhawaa garoonka ay cayaarta ka dhacaysay si ay sawirro u soo qaado iyadoo isticmaalaysa Kameero dheer.
Inkastoo aanan si rasmi ah haweenka Iiraan looga mamnuucin inay tegaan garoomada cayaaraha ay ka socdaan, haddana waxaa dhif iyo naadir ah in aad haweenka ku aragtid goobahaasi, haddan looma ogolo inay daawasho u tegaan halkaasi.
Dad badan ayaa ammaanay go'aanka geesinimada leh ay qaadatay Parisa Pourtaherian si ay uga soo tebiso cayaraaha ka socda garoomada kubadda cagta ee Iiraan iyadoo aanan loo ogolayan, BBC-da ayay sidatan u sheegtay.
Parisa Pourtaherian: Saddex saacadood ka hor ayaan tegay garoonka ay cayaarta ka bilaabanaysay, waxaan isha ku hayay sidii aan usoo qaadi lahaa sawirro, waxaan eegay dhismo ka agdhawaa garoonka, meel kale waan waayay.
Markii nasashada laga soo laabtay,waxaan ka dhaadhiciyay ninka iska lahaa guriga ka agdhawaa garoonka in aan galo gurigiisa si aan fulo saqafka sare ee guriga si aan cayaarta usoo tebiyo.
Xigashada Sawirka, Parisa Pourtaherian
Parisa Pourtaherian waxay saarnayd saqafka guri agdhawaa garoonka si ay sawirro usoo qaado
Wuu ii ogolaaday, waxaan fuulay dusha sare ee guriga, shaqayda si fiican ayaan u watay inkastoo qayb kamid ah garoonka aanan si wanaagsan u arkaynin markaasi, sababtoo ah geed ayaa meesha ku yaallay oo igu horgudbanaa.
Ma aanu nixin, waxaa i arkay booliska ku sugna garoonka ay cayaarta ka socotay lakinse faraha ayay iga qaadeen, shaqadayda ayaan iska sii watay.
Waxaan dareemay farxad ah in aan sawirro kasoo qaado caayartasi wayn oo Iiraan ka dhacday anigoo ku jiro xaaladdaasi dhibaatada badan.
Muxuu Trump u necebyahay libaax badeedka?
Sawirrada ay soo qaaday Parisa Pourtaherian
Sawir-qaadayaasha kale ayaa ku howlanaa inay soo qaadan sawirrada ugu muhiimsan balse markii ay i arkeen anigoo saqafka saaran, waxay bilaaben inay aniga sawirro iga qaadaan dhammaantood.
Sawirradayda waxaan ku arkay baraha bulshada halka qaar kamid ah sawirradayda ay ii soo direen saaxibadayda. dadka reer Iiraan way soo dhaweeyeen tallaabada aan ku dhaqaaqay.
Cayaaraha kubadda cagta waan jeclahay waa sababta aan u noqday sawir-qaade dhanka cayaaraha, waxan soo tebiyay cayaartii saaxibtinimo ee dalka Turkiga ku dhexmartay Iiraan iyo Turkiga ka hor Koobkii Adduunka ee dalka Ruushka lagu qabtay.
Parisa Pourtaherian waxay sheegtay in marar badan ay soo tebisay cayaarta kubadda koleyga
Waxaan sidoo kale soo tebiyay cayaaraha kubadda koleyga sababtoo haweenka Iiraan wuxuu xayiraad ka saaran yahay soo tebinta cayaaraha kubadda cagta.
Riyadaydu waxay tahay in aan sawirro kasoo qaado kooxda Manchester United oo ku caayaarayo garoonka Old Trafford xitaa hal mar ahaate noloshayda, waxaan sidoo kale doonayaa in aan noqdo sawir-qaade caalami ah oo aan u safri karo qaaradaha adduunka si aan sawirro uga soo qaado caayaraha ka socdo daafaha dunida.
Waxaan samaynaya wax kasta oo ii suuro gelin karto in riyadayda ay ii rumoowdo, balse waxaan ku hamuun qabaa in aan arko haween badan inay helaan fursaddan mid lamid ah.
Waxay u warrantay weriyaha BBC-da Victoria Bisset.